Ifilosofi yaseShayina yeYin neYang
Yini oyaziyo ngefilosofi yaseShayina? Mhlawumbe akusikho okuningi ukusebenzisa izisekelo zayo ekuphileni kwansuku zonke. Phakathi naleso sikhathi, abantu baseShayina banamuhla basalokhu behambisa izimpilo zabo emibonweni yezinto ezinhlanu, noma wu-hsin, njengoba bekubiza.
Labo abanesithakazelo kule sihloko, ngokuqinisekile, bazoba nesithakazelo sokufunda lesi sihloko, lapho sizobhekana nazo izinto ezinhlanu, thola ukuthi yiziphi izakhi nendlela yokufunda ukulawula amandla obalulekile emzimbeni wakho.
Ngakho-ke, iyiphi ifilosofi yaseShayina yeYin neYang?
Incazelo yemvelaphi yalezi ziphikisana ezimbili zinikezwa encwadini ethi "Tao de Jing", umbhali wayo isazi sefilosofi sasendulo saseChina uLaozi. Ngokusho kukaLaotzi, indawo yonke yazalwa kanje: kuqala kwakukhona ukuphikisa okubili: i-yang ne-yang, babexhunyanisiwe, futhi inyunyana yabo yazala amandla okuphila, okuthiwa yiChi.
Isikole sezinto ezimbili sisekelwe emfundisweni yezinto ezinhlanu: umhlaba, amanzi, umlilo, izinkuni kanye nensimbi. Lezi zakhi ezinhlanu zihlangana nomunye nomunye. Efilosofini yaseShayina, lapho umuntu omusha ezalwa, amandla amathinteli amahlanu kufanele avumelane kuye, uma ukuvumelanisa kwamandla kuphukile, khona-ke iShayina ehlakaniphile icebisa lo muntu ukuba azungeze leso sici amandla akhe angaphansi kwesimiso. Isibonelo, uma umuntu engenawo "amanzi" anele, kufanele aphile ebhange lomfula noma echibini, abe nomthombo wokuhlobisa noma i-aquarium enezinhlanzi endlini yakhe. Uma lokhu kungenakwenzeka, okungenani izikhathi eziningana ngesonto uvakashele echibini ukuze uxhumane namanzi.
Ngokusho kwefilosofi yamaShayina yamandla, i-Yin no-Yan, amandla emvelo kanye nazo zonke izinto eziphilayo - i-Chi - iphelele emhlabeni wonke osizungezile. Bakho kokubili emizimbeni ephefumulelwe, nasezintweni ezingapheli. Ngamandla e-Chi, wonke umuntu ofunda ingqondo ye-Feng Shui uyazi. U-Chi unesibopho senjabulo yomuntu, ngokuphumelela nengcebo yomndeni wakhe. Kubalulekile ukuthanda nokuhlonipha leli philo eliphilayo, ukumbiza endlini yakho, ukuvula iminyango kuye. Khona-ke, ngokusho kwamaShayina, injabulo nenjabulo kuyofika endlini. Amandla ka-Chi anamandla futhi anamandla, ngakho ukugcina ekhaya lakho kungenzeka kuphela ngokugcina imithetho ye-feng shui.
I-Energy Chi ingena emzimbeni womuntu futhi ihamba kuyo ngokusebenzisa iziteshi ezingu-12 - ama-meridians. Zonke iziteshi ezingu-12 zixhunywe kwezinye izitho zangaphakathi. Lapho kusetshenziselwa ukuxhumana, amandla ahamba emzimbeni womuntu ngokukhululekile, okusho ukuthi impilo yakhe iyinto evamile, isimo sempilo sihle kakhulu. Uma umuntu ezwela imizwelo emibi: intukuthelo, ukucasuka, ukwesaba, khona-ke kukhona ukuvinjelwa kwamandla amakhulu futhi kunezifo ezihlukahlukene kanye nezifo ezihlukahlukene.
Uma amandla agxila emzimbeni njalo, khona-ke umuntu ubeka ingozi yokugula okukhulu, njengoba ibhalansi phakathi kokuvumelana kweYin neYang kuphazamiseka. Uma sikhuluma ulimi lwanamuhla, umuntu uwela esimweni sokucindezeleka. Ukuze ugweme lokhu futhi usize, ungenza ukuzindla, okuyindlela ephumelela kakhulu yokuqeda ukucindezeleka. Esikhundleni sokuzindla, ungakwazi nje ukuphefumula - imizuzwana embalwa ukuphefumulela ngokujulile futhi ugxila ekuphefumuleni kwakho. Ungakwazi ukuvala amehlo akho futhi ucabange indawo enhle kakhulu lapho ungathanda khona. Yini efika kuqala engqondweni? Uma unendawo endaweni emfuleni noma echibini, awunayo amandla okwanele wamanzi, uma uhambise indawo ngomlilo noma emlilweni, udinga amandla omlilo, njll.
Gxila esimweni sakho sangaphakathi, ulalele wena nemicabango yakho, ucabange ukuthi amandla angakanani ugeleza ngokukhululekile ngaphakathi kwakho futhi akunike ukuthula nempilo. Ngokungangabazeki uyoba ngcono enhliziyweni, uzozizwa ugijimi lomsebenzi futhi ujabule, isimo sakho sengqondo sizovuka.
Kukhona indlela emangalisayo ukuthi ungayilawula kanjani kalula imizwelo emibi bese uqala ukugeleza okujwayelekile kwe-Chi energy. Kunoma yisiphi isimo esicindezelayo, thatha amabhaluni amabili nomaka. Okokuqala, yenza uhlu lwezizathu ongawela kuzo esimweni esicindezelayo ephepheni. Lolu hlu kufanele luthinte kokubili kokusebenza nokuphila komuntu siqu. Futhi izizathu zisezingeni lokunciphisa ukubaluleka kwakho. Ukunakekelwa okuyinhloko kunikezwa ngesizathu esiyinhloko, esibangela ukuba khona kwakho okwamanje. Cabanga ngalesi sizathu nangemicabango yaso, thinta ibhaluni lokuqala, unikeze ibhola imizwelo emibi nokucasuka.
Thatha iphini bese usuka phansi kwenhliziyo yakho ibhola leli bhola. Kwenzekani kulokhu? Kulungile! Imizwa yakho emibi iye yaqhuma futhi yaqhuma. Ukujikijela ibhola lesibili, ucabange zonke izinto ezimnandi ezikuzungezile manje, zinezicabango eziqhakazile futhi ezijabulisayo, ungakwazi ukuveza injabulo yakho ngokuzwakalayo, bese ubhala ibhola lesibili. Ibhola ubhale isimo lapho ukhona manje: injabulo, uthando, injabulo, injabulo, injabulo. Dweba ibhola ngokumomotheka okujabulisayo, izimbali, ubonise wonke umcabango wakho kanye nobuciko.
Dlala ngebhola, uliphonse, futhi wena ngokwakho ngalesi sikhathi, uphinde ukhumbule ngokwakho injabulo oyifaka kule ibhola yesibili. Futhi esimeni esinzima, khumbula ibhola lakho, khumbula leyo mizwa eyakuphazamisa uma uyivulela. Kuzokwenza kube lula kuwe ukuthi ubhekane nokucindezeleka nezimo zokuphila ezinzima.
Nansi ifilosofi yamaShayina yanamuhla ...
Ingabe ukuphela kwezwe kuyoba?
I-yogi enkulu yaseNdiya yasendulo
Ikhekhe "I-Cherry edakiwe"
Kuthiwani uma izingane ziphikisana njalo?
I-Biography kaLouis de Funes
Kungani udinga ukudla ukudla okuqinile
Indlela yokuthuthukisa ukondla nokuhlanzwa kwesikhumba
Indlela yokufundisa ingane ukuziphatha okuhle?
Imikhiqizo ye-tan engcono kakhulu
Uju ugoqa ngokumelene ne-cellulite
Ziyini izindonga zegumbi lokuphumula?
I-Risotto ngemikhiqizo ebhemayo
Isobho se-blueberry eluhlaza